थरुहट आन्दोलनको उपचारमा सहयोग गर्ने डा. लामिछाने र खरेललाई सम्मानित हुने – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
थरुहट आन्दोलनको उपचारमा सहयोग गर्ने डा. लामिछाने र खरेललाई सम्मानित हुने
२०७४, १२ पुष बुधबार १७:५८
सन्तकुमार चौधरी ,चितवन । पाँचौ खिचरा महोत्सव २०७४ मा डा. प्रमोद लामिछाने र डा. वीएम खरेललाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ । थरुहट आन्दोलनका घाइते सन्जीत महतोको उपचारमा सहयोग गरेको भन्दै एलाईभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर भरतपुरका चिकित्सक डा. प्रमोद लामिछाने र हस्पिटलकी प्रबन्ध निर्देशक डा. बीएम खरेललाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रमुख अतिथिको रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम चितवन क्षेत्र नं. ३ प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निमन्त्रणा गरिएको महोत्सव मुल समारोह समिति संयोजक नारायणप्रसाद महतोले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा आयोजक थारु कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नं. ७ ले घाइते सन्जीत महतोलाई समेत नगद सहित सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ । थरुहट आन्दोलनमा घाइते भएका महतोको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय भएको प्रचार प्रशार समिति संयोजक कारी महतोले जानकारी दिनुभयो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा दक्षिण कोरियाले समेत सोही अवसरमा आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । घाइते सन्जीत महतो राहतकोषका लागि दक्षिण कोरियामा रहेको नेपालीहरुबाट सभाले आर्थिक संकलन गरेको थियो । पाँचौं खिचरा महोत्सव पौष २८ गतेदेखि माघ ८ गते सम्म चल्ने छ ।